Egwuregwu kacha mma maka ụmụaka oke | Nzukọ mkpanaaka
Edere Ferreno | 22/11/2021 11:41 | Egwuregwu
Ratchildren bụ ndị na-eto eto ndị ha na-eji ọtụtụ awa kpọchie n'ọnụ ụlọ ha na-egwuri egwu n'ịntanetị ya na ndị egwuregwu ndị ọzọ. Nke a bụ ma ọ dịkarịa ala nkọwa ya, echiche nke dịworo anyị afọ ole na ole ugbu a na nke yiri ka ọ gaghị aga ebe ọ bụla. Ngagharị a malitere afọ iri gara aga ma ka dịkwa ndụ taa. Ọ bụrụ na ị bụ ma ọ bụ tụlee onwe gị otu, ndị a bụ egwuregwu kacha mma maka ụmụaka oke.
Enwere ọtụtụ egwuregwu na ụmụaka oke nwere njikọ chiri anya.. Ya mere, n'okpuru ebe a, anyị na-ahapụ gị nhọrọ nke egwuregwu kacha mma maka ụmụ oke. Ma ị bụ otu ma ọ bụ na-ewere onwe gị otu, ndị a bụ egwuregwu na-ekwesịghị ịdị na-efu na repertoire gị na ị ga-enwe ike igwu egwu ruo ọtụtụ awa n'enweghị nkwụsị ọ bụla.
2 Oku ọrụ
5 Otu esi amata ụmụaka oke
Anyị na-amalite na otu n'ime egwuregwu kacha emetụta ụmụaka oke. Minecraft bụ kpochapụwo na ahịa, egwuregwu dịla kemgbe ọtụtụ afọ, mana na-aga n'ihu na-enwe nnukwu ìgwè ndị na-eso ụzọ n'ụwa nile. Nke a bụkwa egwuregwu nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị a na-akpọ ụmụ oke na-egwu ya mgbe niile, ya mere ọ bụ aha na-enweghị ike ịpụ na ndepụta nke ụdị a.
Kedu ihe kpatara Minecraft ji bụrụ otu n'ime egwuregwu ụmụ oke ndị ahụ? Ị ga-ahụ na ndị a na-akpọ ụmụ oke bụ ndị ọkachamara egwuregwu na egwuregwu a. Ha maara usoro ntụziaka niile, ha na-agbachitere ókèala ha dị ka ọ dịghị onye ọzọ na-eme, ha na-ewuli elu karịa onye ọ bụla ọzọ, ha maara ụdị aghụghọ dị iche iche iji kwalite na ha nwere ike ịmepụta ụdị ihe ọ bụla ga-enyere ha aka ịga n'ihu. Ha bụ ndị egwuregwu kacha pụta ìhè na multiplayer na ya, ha na-agagharị dị ka azụ na mmiri na Minecraft.
Minecraft bụ otu n'ime egwuregwu ebe ife mbụ nke ndị a na-akpọ ụmụ oke mere na ọ na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime egwuregwu kachasị amasị nke ụdị onye ọrụ a. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ịbụ otu ma ọ bụ chọọ ịma ma ị bụ otu, ọ bụrụ na ị na-etinye ọtụtụ awa na Minecraft, ị maraworị azịza ya.
Oku ọrụ dị n'akụkụ Minecraft otu egwuregwu ebe ị ga-ahụ na mbụ ifegharị ma ọ bụ ọgbọ nke a na-akpọ ụmụ oke. Ebili a dabara na ọganihu nke egwuregwu a na ahịa, bụ nke a maara karịsịa na njedebe 2000. Ndị a bụ ụbọchị nke a mụrụ ọgbọ mbụ nke ụmụ oke, dị ka ọtụtụ ibe weebụ. The multiplayer mode nke oku ọrụ bụ otu n'ime igodo ma ọ bụ ihe nyeere ya ewu ewu n'etiti ndị ọrụ.
Ọnụnọ dị ukwuu nke ụmụ oke na egwuregwu a bụ ihe na-akpata esemokwu mgbe niile na ọnọdụ ọtụtụ ma ọ bụ Battle Royale n'etiti ndị ọrụ. Enwere nnukwu ọnụnọ ụmụ oke, si n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa, yabụ ị ga-eche ha ihu n'asụsụ niile. Ha bụ ndị egwuregwu ga-akparị gị ma ọ bụrụ na ị na-egbu ha ma ọ bụ na ị nọ n'ọnọdụ ka ha mma, ndị ga-akparị gị ma ọ bụrụ na ị na-egwu egwu karịa ha ma ọ bụ na-egbu ndị iro ole na ole. Ihe ọ bụla ị ga-ama na ọ gaghị adị mma.
Ụdị egwuregwu dị iche iche nke ewepụtara, ọtụtụ usoro ya, nọgidere na-ewu ewu na ụmụaka oke. Ọ bụ ya mere a ka na-ewere oku ọrụ ka otu n'ime egwuregwu ndị ahụ dị mkpa maka ụmụaka oke. Ya multiplayer mode bụ otu n'ime ihe mere e ji dị ọtụtụ na aha a na o yiri ka a gaghị enwe mgbanwe, ebe ọ bụ na ọ ka bụ egwuregwu nke nwere a legion nke kasị kwesịrị ntụkwasị obi na-eso ụzọ gburugburu ụwa taa.
Fortnite bụ otu egwuregwu kacha ewu ewu maka ụmụaka oke taa, egwuregwu na-ewu ewu karịsịa na ọgbọ ọhụrụ nke ụmụaka oke. Ọ bụ egwuregwu nke ọtụtụ ndị weghaara site na aha dị ka oku ọrụ na ahịa. Battle Royale ha bụ ọnọdụ zuru oke maka ụmụ oke oke a, ndị bụ ndị ọrụ na-eti mkpu na mkparị karịa onye ọ bụla mgbe ha na-egwu egwu, n'ezie ị ga-enwe ike ịmata ha ngwa ngwa mgbe ị na-egwu egwu.
Ụmụ oke bụ ndị nwere akpụkpọ anụ kacha mma, ndị na-ewu ihe kacha mma, ndị maara aghụghọ niile zoro ezo na Fortnite ma ọ bụ ndị nwere ngwá agha kachasị mma na egwuregwu. Yabụ na ị maara ihe ị ga-ahụ: mkparị ebe niile. N'ihi na-enweghị na-na-adịbeghị anya akpụkpọ, n'ihi na-adịghị mma na-agbapụ, ma ọ bụrụ na ị na-egbu ha tupu ha emecha gị, ma ọ bụrụ na ị na-ejedebe mma ma ọ bụ njọ na ndepụta ... N'agbanyeghị ihe kpatara ya, na-atụ anya mkpu na mkparị n'ebe nile.
Fortnite bụ egwuregwu ama ama ama ama, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị ọrụ gburugburu egwuregwu ahụ na-emecha bụrụ ihe na-egbu egbu, n'ọtụtụ oge n'ihi mkparị na ọgụ gabigara ókè nke ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ.
GTA bụ ihe ọzọ nke sagas ebe anyị na-ahụ ọtụtụ ụmụ oke, n'agbanyeghị ụdị mbipụta nke egwuregwu ọ bụ. Ọ bụ otu n'ime aha ndị a na-ewu ewu nke ukwuu n'etiti ndị ọrụ a. Karịsịa na ụdị egwuregwu a ọtụtụ (dịka ọmụmaatụ na GTA 5) enwere ọtụtụ ụmụaka oke ugbu a, ihe ọtụtụ n'ime gị ghọtara ugbu a. Ebe ọ bụ na a na-amata ha n'otu ụzọ ahụ dị na egwuregwu ndị ọzọ dị na ndepụta a.
Ọ bụrụ na ị na-agbaba n'ime ha, ọ bụrụ na ị na-egbu ha tupu ha egbu gị, ma ọ bụrụ na ha na-egbu gị ... N'agbanyeghị ọnọdụ, ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ha na-adịghị amasị ị pụrụ ịtụ anya a otutu mkparị site n'akụkụ ha. Egwuregwu egwuregwu a ka na-ewu ewu nke ukwuu n'etiti ụmụaka oke, n'ihi ọnụnọ nke ụdị ọtụtụ egwuregwu a dị na ha, yabụ ị ga-ahụ ọtụtụ n'ime ha mgbe ị na-egwu egwu na ngwaọrụ gị ọ bụla. Ọ dị mma ịkwado maka ya, ebe ọ bụ na ọ na-adịgide adịgide na ụdị egwuregwu ndị a, ọ dị mwute ikwu.
Otu esi amata ụmụaka oke
Anyị ekwuola ụfọdụ egwuregwu kacha mma maka ụmụaka okeYana egwuregwu ndị ahụ nke anyị nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị a na-akpọ ụmụ oke. Tụkwasị na nke ahụ, anyị agwawo gị ihe anyị pụrụ ịtụ anya ya mgbe nile, nke bụ mkparị. Nke bụ eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ akụkụ nke ga-enyere anyị aka ịmata ngwa ngwa nwa oke na egwuregwu ọ bụla n'ịntanetị. Ndị a bụ njirimara ma ọ bụ ụzọ e si eme ihe ga-enyere anyị aka ịmata na anyị na nwa oke na-emekọ ihe mgbe anyị na-egwu egwu:
Afọ: Aha ha kwuru ya nke ọma, ọ bụkwa na ha bụ ụmụaka, n’ọtụtụ ọnọdụ site n’agbata afọ 8 ruo 16. Ha bụ ụmụaka ndị nwere obere ahụmahụ na ndị nzaghachi ha na ihe niile bụ mkparị, ebe ọ bụ na ha amaghị ihe ọ bụla ọzọ. Ọzọkwa, egwuregwu ndị ha na-egwu na-abụkarị egwuregwu ndị a ma ama n'oge a ma ọ bụ ndị YouTuber kacha amasị ha na-egwu n'oge ahụ.
Ịti mkpu na mkparị: Nke a bụ otu n'ime ụzọ doro anya isi mata ụmụ oke mgbe anyị na-egwu egwuregwu ịntanetị. Anyị nwere ike ịtụ anya ọtụtụ mkpu na kwa ọtụtụ mkparị. Ha na-eche na ha dị mma karịa ndị egwuregwu ndị ọzọ na egwuregwu ahụ, n'ihi ya, anyị nwere ike ịtụ anya àgwà ahụ site n'aka ha, na-enwe ọtụtụ mkpu, mpako na ịkpọ aha. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị ka ha mma bụ mgbe anyị nwere ike izute mkpu ndị ahụ.
Trolls: Nke a bụ àgwà a na-ahụkarị ma ọ bụrụ na ha anaghị eme nke ọma n'egwuregwu. Ọ bụrụ na ihe agaghị aga dịka ha tụrụ anya ya, ọ na-abụkarị na ha ga-amalite ịkpasu gị iwe ma na-akpa àgwà ka ezigbo trolls. Ọ bụ a nkịtị àgwà, nke anyị ga-n'ime akaụntụ, ma ọ bụ ihe na-egosi na doro anya enweghị ntozu okè na ha akụkụ.
Igwe okwu: Akụkụ ọzọ a na-emekarị n'ụmụ oke bụ na ọ bụ ha na-emeghe igwe okwu ha mgbe niile. Ọ bụ ha bụ ndị na-eti mkpu nke ukwuu ma na-eme mkpọtụ nke mmadụ niile na-eji olu ụda olu kacha elu. Nke a bụ ihe nwere ike ịdọpụ uche ọtụtụ ndị egwuregwu ma bụrụ ihe na-akpasu iwe, yabụ ị kwesịrị ịdị njikere maka ihe omume a mgbe ị banyere otu n'ime egwuregwu ndị a.
Mpempe akwụkwọ: Otu akụkụ nke anyị nwekwara ike ịmata ha bụ na ọtụtụ n'ime nkebi ahịrịokwu ma ọ bụ omume ha bụ nanị mbipụta nke ụfọdụ ndị YouTube na-ewu ewu n'oge ahụ. N’ezie, ị pụrụ ịghọta na ha na-eṅomi okwu ndị anyị maaralarị site n’aka ndị ọzọ, ma nke a bụ ihe a pụrụ ịkọ amụma, ebe ha bụ ụmụaka.
Ọ bụrụ na i buru nke a n'uche, ị ga-enwe ike ịmara na ọ bụ nwa oke wee si otú a ghara ịbanye n'egwuregwu ha. Egwuregwu ndị nwere ọnọdụ ịntanetị ọtụtụ mmadụ bụ ebe anyị nwere ike ịtụ anya ọtụtụ oke ụmụ oke, ọ dị mwute na ọtụtụ. Yabụ na ọ dị mma na ị dị njikere yana ka ị ghara ikwe ka ọnụnọ ha mebie ahụmịhe egwuregwu gị, n'ihi na nke a abụghị ihe bara uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Egwuregwu » Egwuregwu kacha mma maka ụmụaka oke
Steam VR: kedu ihe ọ bụ, otu esi etinye ya na egwuregwu ndị isi